Onye isi ala Sekmen kwusiri ike na 'nnweta' na 'nnweta' | RayHaber
HomeTurkeyEastern Anatolia Region25 ErzurumIsi mesie ike na 'nnweta' na 'nnweta' n'aka Onye isi ala Sekmen
13 / 09 / 2019 25 Erzurum, Eastern Anatolia Region, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Turkey
Okwusi ike banyere nnabata na nnweta site na taabụ Onye isi ala
Onye isi obodo nke Erzurum Obodo mepere emepe Mehmet Sekmen kwuru "Anyị ga - eme Erzurum ịbụ obodo ana - anabata ya na obodo nnabata". Turkey na co-kwụrụ ụgwọ site EU, ndị Ministry of Transportation na Infrastructure ekenịmde ke "Accessibility Project nke Njem Transport Services na Turkey" s Erzurum Onodi ẹkenịmde taa. N’ikwu okwu na ogbako omumu ihe a emere na Mahadum Atatürk Nene Hatun Cultural Center na ntinye aka nke Cahit Turhan, Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa, Mehmet Sekmen, onye isi obodo Mgbakọ Metropolitan, kwusiri ike ịdị mkpa nke ịbanye na ọrụ ụgbọ njem. N'okpuru ebe a na akụkụ dị ukwuu nke njem ha na Erzurum ka edobere maka ọrụ ụgbọ njem, Sekmen kwuru na ọ dị mkpa ịnwe opekata mpe dịka njem.
KPỌRỌ MAKA MAKA INWETA VLỌ IWU
"Accessibility nke Njem Transport na Turkey Project", ndị njem na karịsịa na njem iga oru na Turkey bụ nnọọ njọ mmepe na kwuru na mgbanwe na-emeghe ọnụ ụzọ Tab, na ubi nke njem Turkey kasị anya dere nwekwara dọọrọ uche. Taabụ, ikuku, oké osimiri, okporo ụzọ na okporo ígwè iga na akụkọ ihe mere eme nke Republic chetara kasị ego e mere, bilitere nọgidere ibe na mgbagharị na Turkey kwupụtara ruru a ebe ọ fọrọ nke nta gbara ajọ dimkpa na-asọ mpi na mba ndị mepere emepe na ụwa a na ubi.
N'ikwu na njem njem dị mkpa na akara nke mmepeanya, Onye isi ala Sekmen kwuru, er Mba ndị ebe akụrụngwa na-akparaghị ókè ma nwee ike iji ya rụọ ọrụ n'akụkụ niile kwesịrị ịghọta; ọkọlọtọ Ndị a bụ mba ebe obibi ibi ndụ dị elu ma nweekwa ikike zuru ezu ”.
EGO NA-EKWU SILKWAY SI SEKMEN
N’ikwu na nanị otu ihe Erzurum si bụrụ ebe azụmaahịa zuru oke n’oge gara aga bụ njem, Sekmen kwuru, büy Itk Ọ na - egosipụtakwa oke ọrụ gọọmentị anyị na ọrụ njem ọhụrụ ọ mejupụtara; Kzọ silk ahụ mere eme na-atụgharị anya ọzọ wee bie mmụọ na ọhụụ. Nke a bụ isi ihe kpatara eziokwu ahụ na ihe omume ndị a na-atọ anyị ụtọ ma na-atọ anyị ụtọ. N'ihi na anyị maara nke ahụ; Anyị ga-eji ohere njem ga mezue usoro mmepe mmekọrịta anyị na nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya na iwepu oghere dị n'etiti mmepe maka ohere njem. N'ọnọdụ a, m ga-achọ ikele gọọmentị anyị n'ozuzu ya na ndị ọrụ njem na akụrụngwa n'ihu gị maka ohere na ohere ọ na-enye. "
AKWARTKWỌ AKWIGKWỌ AKW OKWỌ AKW OKWỌ AKW ISKWỌ AKW ISKWỌ OZI Ọ B TR ỌR TR
N’ịkọwapụta ụdị anlat Access ”nke na-enye ọrụ njem ụgbọ ala nwere nnukwu ọfụma yana mkpa njem, Duo Sekmen kwuru, anız Ọ bụrụ na ịnweghị ike irite uru n’ọrụ ị na-enye n’ọdụ ụgbọ njem ahụ n’ ọfụma na n’ụzọ dị mfe, ụmụ amaala nwere nkwarụ, Ọ bụrụ na eriteghị uru zuru ezu site na ị ga-ekwe omume, ị hapụla ebe ị na-aga njem. N'ihi ya, "Accessibility Project nke Njem Transport na Turkey" ka nke ọma, dị ka anyị bụ a dị nnọọ mkpa nzọụkwụ nke mata, "ka o kwuru. Sekmen kwusiri ike na ịnweta ọrụ ụgbọ njem na-etinye nnukwu ọrụ na gọọmentị obodo ma gbakwunye, “Achọrọ m ịkọwapụta na; eleghi anya mpaghara ebe anyị nọrọ oge niile n’oge ọrụ anyị bụ njem. Na mgbakwunye na iweta netwọ ụgbọ njem njem n'obodo anyị, imelite ụzọ ndị dị ugbu a ma na-edozigharị ha dịka mkpa nke ụbọchị abụrụla ihe mbụ dị mkpa.Ma n'ezie, teknụzụ anyị bụ isi; iji mee ka netwọkọ njem na ụgbọ ala anyị nwee ike ị nweta. N'ime usoro a, anyị na-eji usoro ọmịiko, anyị arụ ọrụ n'ọtụtụ ebe site na bọs bọs anyị ruo ndị njem ụgbọ njem ọha, site na nkwarụ aka, na ụzọ ụkwụ na ndị njem iji ruo n'ụzọ ezi uche dị na ya, anyị na-anọgide na-eme otú ahụ ”.
PLKPAT TR ESSBESSRESS AKW INKWỌ N'IME ERZURUM
Sekmen kọwara na ụgbọ ala niile na-ebugharị na njem ndị njem nwere ike iji ya maka ndị nwere nkwarụ, ndị agadi na ndị agabigaghị agagharị. N'iburu n'uche ọnọdụ ọjọọ Erzurum oge oyi, anyị na-etinyekwa mkpa nke ụmụ amaala anyị nwere nkwarụ n'egwuregwu Smart Stop na nkwụsị bọs anyị, nke bụ atụmatụ anyị. N'ime ebe nkwụsị ahụ, anyị ekepụtala ndị obodo anyị nwere nkwarụ pụrụ iche ka ha nwee ike jiri oche nkwagharị ha na-eche ma ọ dị mkpa. Anyị na - eduzi ọmụmụ ihe ọhụrụ na ngwa nkwụsị smart. N’oge na-adịghị anya, anyị ga-eji usoro nrịba ama a na-ele anya na nke anya wee kwadebe ebe nkwụsị anyị, anyị ga na-enye nkwụsị ndị a niile n'obodo ahụ. Mpaghara ọzọ anyị na-arụ ọrụ bụ usoro okporo ụzọ na ntinye ama. Anyị ga-emelite usoro a ma ruo ọkwa nke nwere ike imezu atụmanya nke ụmụ amaala anyị nwere nkwarụ. Ọzọ, anyị arụpụtala okporo ụzọ anyị, ihe ntanetị, paveare anyị, n'ámá na oghere ndị ọzọ maka ụmụ amaala anyị nwere nkwarụ iji mepụta obodo nwere nnukwu nnweta. Yabụ lee ihe ahụ; Taa, nwanne nwoke ma ọ bụ nwanyị nwere nkwarụ anụ ahụ ma ọ bụ nke na-ahapụ ụlọ ya na Yıldızkent, nke dịpụrụ adịpụ site n'etiti etiti obodo, nwere ike iru ngwa ngwa nke obodo ahụ n'ihi ụzọ dị mma, ụzọ njem na-aga njem na usoro nkwụsị smart.
Ọrụ MAKA HANDICAPP NA ERZURUM
Dị ka Turkey Statistical Institute si data; Mayor Mehmet Sekmen kwughachiri na ihe dị ka otu puku ụmụ amaala nwere nkwarụ na Erzurum 55, ọnọdụ a pụtakwara nnukwu ọrụ maka ha, ọ sịrị. Menmụ nwoke nwere oke a, nke mejupụtara akụkụ buru ibu na mkpokọta obodo, enweghị atụmanye anyị ibu ọrụ pụrụ iche. O doro anya na gọọmentị anyị emeela nnukwu mbọ iji hụ na ntinye nke ụmụ amaala nwere nkwarụ na ọha mmadụ ma rụọ ọrụ dị ike na ndụ mmekọrịta akụ na ụba. Na mgbakwunye na ọmụmụ ndị a; Anyị achịkọtala obodo anyị nke Erzurum. Ruo ugbu a, anyị enyefela ụmụnna anyị nwere nkwarụ ọtụtụ batrị na oche nkwagharị. Enweghị afọ ojuju na nke a, anyị guzobekwara ụlọ nrụzi na mpaghara anyị. N’ikwu ya, maka nwanna ọ bụla nwere nkwarụ nke oche igwe ma ọ bụ oche nkwagharị ya adaa, a na-achịkọta agụmakwụkwọ anyị ozugbo ma rụkwaa oche ya n’akwụghị ụgwọ. Ọzọkwa, na ngalaba nkwarụ ndị nwere nkwarụ, ebe anyị mepere ụzọ ya maka ọrụ n'ọnwa gara aga, anyị na-eme ihe dị mkpa maka itinye nke ụmụnna anyị nwere nkwarụ na ndụ mmekọrịta ..
S SSITIVITY B DISYÜKŞEHİR
Onye isi obodo Sekmen depụtara ọrụ nke ndị isi obodo ukwu na - elekọta maka ụmụ amaala nwere nsogbu na Erzurum dị ka ndị a: ma ọ bụ Anyị na-enye ụmụ akwụkwọ nwere nkwarụ ọrụ n'efu ma buru ha nke anyị kenyere maka ụlọ akwụkwọ ha. Anyị nwere ụlọ ọrụ na ma ụlọ ọrụ obodo na nke obodo banyere ọrụ nke ụmụnna anyị nwere nkwarụ, anyị na-ebutekwa ụzọ maka ụmụnna anyị nwere nkwarụ na-achọ ọrụ. Anyị na-eresị ụmụ amaala anyị nwere nkwarụ mmiri na mgbakwunye nke 50, mana anyị na-ejikwa ọrụ ụgbọ njem anyị n'efu. Anyị na-enyekwa ọzụzụ na nka maka umunne anyị ndi nwoke na ndi nwanyi ndi nwere nkwarụ nọ na ESMEKs nke na-arụ ọrụ n'okpuru obodo anyị ma mee ka ha nwee ike inye aka na mmefu ego ezinụlọ ha. Site na nke a na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ, enwere m olileanya na anyị ga-eme Erzurum obodo nke oge a ebe ụmụnna anyị nwere nkwarụ ga-elekọta, mepụta, nweta ma nweta ndụ ha n’enweghị nsogbu ọ bụla. Na a na-ekwu, Turkey site na àjà m ekele ndị niile na usoro nke nkwadebe na-egbu nke accessibility nke Njem Transport Project, ga-adakwasị anyị na anyị na-emezu ịhụnanya nile di iche iche nke ịhụnanya ọrụ na-chọrọ ikwu. "
President doro anya afọ 2016
Okwu Minista Ağbal nye President Sekmen
Ọganihu dị elu na-azụsi ike site na Union of City Councils
Na-emesi ụmụ amaala na National Railway ike site na Apaydın
CHP Kani Beko na-emesi ihe ngwọta nye nsogbu İZBAN
Ozi ọma si n'aka President Türel nye ndị ahịa nke Ụgbọ njem
Mayor Ergün na-eleta ndị uweojii na-elekọta Bilgiç
Site na Kayseri Transportation Inc maka ndị nwere nkwarụ Eng
Ọchịchị Şahin nke Ọsọ ọsọ ọsọ na Gaziray
Nkpọku sitere n'aka President Yücel ruo mmalite nke Alanya Cable Car
Oral Oral site na State Garden Bridge maka àgwà aghụghọ
Ụzọ dị elu na-azụ Ozi ọma si Mayor Türel ka Alanya
Erzurum ulo oru
Transportgbọ njem ọha nke Erzurum